Cylind Tin Can, Tin Can Isitsha, Metal Ice Bucket, Tinplate Ibhokisi - Baolai
6.3L indandatho inhlanhla Tin Ibhakede Ukuze Paint, Chemical Ngo ...
2.5L Tin Amathini ngoba ukudla Ibanga Amafutha Ezidliwayo camelli ...
Kungenziwa egcizelele, thina sinikeza nje ekufakeni esitsheni, abaningi ngcono ikhwalithi imikhiqizo ngawe, efanelekayo upende zamakhemikhali, upende, imoto upende, amafutha engine, lubricating amafutha, Uyinki netikotela.
umkhiqizo ezihlukahlukene yethu sebhithi kuqediwe, arcade, ukugqwala ukumelana, sikumema ukuba ujoyine, ukuthuthukiswa emakethe kanye nomqondo omusha.
uwoyela wokupheka, tikotela amafutha omnqumo, ukusetshenziswa ukudla ebangeni tinplate impahla, siba nempilo engcono, ngaphezulu imvelo.
Noma yini oyifunayo ukufeza noma dala, ithimba lethu kukhona ku-isandla usizo. Kusukela eyinkimbinkimbi ezimise amathini ukuze imiklamo eziyingqayizivele.
Dongguan Baolai Metal Can Co., Ltd. esungulwe ngo-2012, it sika omunye owaziwa iziqukathi tinplate emaphaketheni abakhiqizi e China. imikhiqizo eziyinhloko: ezidliwayo & chemical ikani uwoyela, round, isikwele kanye nezinye izinhlobo amathini, izinhlobo ephelele futhi Ukucaciswa. kwemboni yethu ine R eqinile & D namandla kwezobuchwepheshe, imishini eziphambili, abe iqembu kwabasebenzi abaqeqeshiwe futhi lobuchwepheshe abaphezulu. Ine 12 eziphambili imishini zokukhiqiza imigqa amazwe kusuka eJalimane, eJapane, Taiwan nakwamanye amazwe, kanye 150,000㎡ workshop kanye umthamo ukukhiqizwa zonke ezingaphezu kuka 100,000 PC.
Tin Ibhokisi , Oil Tin Can , Tin Amathini , Tin Ibhakede , Tin Isitsha , Ukudla Amathini ,